Mpividy an-tserasera 5 no mifehy ny fialantsasatra | Martech Zone
Mpividy an-tserasera 5 no mifehy ny fialantsasatra
Zoma, Desambra 7, 2012 Alakamisy, Desambra 6, 2012 Douglas Karr
Ireo olona ao amin'ny Maxymiser dia nizara ny sary farany navoakany, Mpivarotra an-tserasera 5 no mifehy ny Interwebs fialantsasatra. Tena tiako ny fahitana toy izao satria ny antontam-angona be dia be dia manondro ny mpivarotra antonony… ary avy eo dia arakaraka ny miralenta, ny taona ary ny vola miditra. Ny tena izy dia maro ny antony manosika ny olona hividy.
Maxymiser dia mamaritra olona 5 manan-kery amin'ny mpiantsena. Izy ireo no mpihaza varotra, mpiantsena an-tserasera voalohany, mpividy entana mora entina, mpivarotra mila aingam-panahy ary mpividy minitra farany.
Tags: ecommerceSary torohayonline shoppingpersonas miantsena an-tseraseraolonafiantsenana
CodeGuard: Famerenana tranokala ao anaty rahona
Ny statistika mitambatra dia afaka mitarika anao ho diso
Dec 10, 2012 amin'ny 9: 56 AM
Na dia sahirana toy ny fiainako aza aho dia tsy maintsy mieritreritra ny tenako ho karazana mpivarotra farany - ilay mpividy farany. Toa misy fotoana foana hanaovana an'io sy hanaovana an'izany alohan'ny Krismasy ary alohan'ny hahalalanao azy dia ny 20 desambra ary tsy manana fanomezana ho an'ny fianakavianao akory ianao.
Dec 10, 2012 ao amin'ny 5: PM PM
Miaraka aminao aho, @PetieKelly: disqus! Raha ny marina, ny zanako dia zatra mahazo fanomezana roa rehefa afaka fialantsasatra… Tsy zakako akory ny mijoro milahatra amin'ny minitra farany!